Esi gbanwee ụlọ ịsa ahụ na ụfọdụ echiche dị mfe | Bezzia
Susana Garcia | 03/05/2021 20:00 | .Chọ Mma, Trendschọ mma nke ọma
Ime ụlọ ịwụ bụ otu n'ime ebe n'ụlọ anyị choro otutu oru na mgbanwe ma oburu na anyi choro imeghari ya. Mana enwere ike ịgbanwe ọdịdị ya site na iji aka ole na ole na-enweghị ịgafe nnukwu ọrụ ma ọ bụ usoro siri ike. Ọ bụ ya mere anyị ga-eji rịba ama aghụghọ na echiche ole na ole iji gbanwee ụlọ ịsa ahụ n'ụzọ dị mfe nke na-eme ka anyị chee na anyị nwere oghere ọhụụ.
Imeghari oghere abụghị ihe dị mfe, ma anyị nwere ike ime ya na ụfọdụ echiche. Enwere ndị mmadụ na-ejikwa ịgbanwe oghere ha n'ụlọ na-enweghị ịrụ nnukwu ọrụ, nke mere na ha jiri ihe ha nwere wee chekwaa ego na mgbanwe ahụ. Anyị ga-ahụ ụfọdụ echiche ga-enyere anyị aka ịgbanwe ụlọ ịsa ahụ n'ụzọ dị mfe.
1 Jiri agba tile
2 Amaja na akwụkwọ ahụaja
3 Gbanwee sink na mirror
4 Tinye ala ohuru
5 Tinye osisi
6 Ikpokọta textiles na nkọwa
Jiri agba tile
Otu n'ime ihe ndị a na-atụ aro mgbe niile mgbe ị na-arụzigharị oghere na-enweghị itinye ego nke ukwuu bụ ịzụta ezigbo agba iji nye ihe niile aka. Ọ bụghị naanị na mgbidi ahụ ga-adị ọhụrụ, mana anyị nwere ike ịgbanwe agba nke ime ụlọ ịwụ ahụ Ma mee ka ihe niile buru ndu ohuru N'okwu a, anyị kwesịrị iji agba tile ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe anyị nwere n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ. Enwere ọtụtụ agba, ya na matte, satin ma ọ bụ ihe na-egbuke egbuke, iji nye ụlọ ịsa ahụ ọhụụ ọhụrụ. Nke a bụ otu n'ime ihe mbụ ị ga-atụle. Nwere ike ịgbanwe okpokoro ịwụ ahụ, ebe a na-asa ahụ ma ọ bụ mgbidi niile dị ka nke a.
Amaja na akwụkwọ ahụaja
Akwụkwọ ahụaja bụ mmewere nke anyị na-ejikarị ehi ụra na paseeji ma ọ bụ ime ụlọ. Mana ọ bụghị ihe a na-ahụkarị na mpaghara ime ụlọ ịwụ. Kaosinadị, taa ọ bụ ihe dị elu nke nwere ike iji ya mee ihe n'akụkụ ụfọdụ nke ime ụlọ ịwụ ahụ. Ọ bụrụ na ị nwere mgbidi mgbidi na-enweghị taịl, ị nwere ike ịba uru ma nwee ike ịnwe nnukwu akwụkwọ ahụaja iji nye vinteji ma yie ụlọ ịsa ahụ gị. Ọ bụrụ na ime ụlọ ịwụ ahụ bụ ụdị mmanya vaịn, echiche a dị mma ma ị nwere ike ime ka ime ụlọ ịwụ ahụ bụrụ ebe dị mma.
Gbanwee sink na mirror
Ị nwere ike tinye ego na ihe efu ohuru na enyo. Ọ bụ akụkụ dị oke mkpa nke ime ụlọ ịwụ ahụ nke nwere ọtụtụ ọnụnọ na ama. Ọ bụrụ na anyị enweghị ike ịgbanwe ihe ndị ọzọ, itinye ihe ntanetị ọhụrụ na nchekwa na enyo ị masịrị nwere ike ịbụ otu ụzọ isi mee ka ụlọ ịsa ahụ dị ọhụrụ. Mirdị enyo na-adịkarị mfe, gburugburu ma ọ bụ nke ochie bụ ihe ama ama. Na ala ị nwere ike itinye ebe nchekwa iji chekwaa ihe na agba ọkụ dị mma. N'ọnọdụ ọ bụla, ụdị nke arịa ụlọ ahụ ga-adabere n'ụdị ụlọ ịsa ahụ.
Tinye ala ohuru
Nke a bụrịrị mgbanwe nke ọ bụghị mmadụ niile nwere ike ịme, mana eziokwu bụ na ọ ga-ekwe omume ịgbanwe ala na obere ọrụ taa. Nwere ike ịhọrọ ala nke ahụ bụ wụnye na pịa usoro nke vinyl ala na-e imitateomi osisi. E nwere ha nke mara ezigbo mma na agba ma ha na-eme ohere ahụ ka ọ dị ugbu a ọfụma ma ugbu a naanị site n’ịgbakwunye ya n’elu ala nke anyị nwere ma ọ bụrụ na ọ pụọla n’ụdị
na osisi na-enye agba na ndu ihe nile. Ọ bụ ya mere ha nwere ike iji bụrụ ezigbo echiche iji chọọ oghere mma. Gbakwunye osisi na ifuru na-agbakwunye bohemian na aka pụrụ iche na ohere ọ bụla. N'ihe banyere ime ụlọ ịwụ ahụ, anyị kwesịrị itinye osisi ndị na-eguzogide gburugburu iru mmiri nke na-adịkarị, ebe ọ bụ na ha agaghị adị ndụ. Ma enwere ụfọdụ osisi kwesịrị ekwesị maka oghere ndị a.
Ikpokọta textiles na nkọwa
Ihe ọzọ ị nwere ike gbanwee mfe bụ textiles na obere nkọwa, nke ga - emekwa nnukwu ihe. Chọọ maka akwa nhicha dabara na nkọwa ụfọdụ ma ị ga - ahụ na nchikota ndị a na - enye mmekọrịta ụfọdụ na oghere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » .Chọ Mma » Otu esi agbanwe ime ụlọ ịwụ ahụ ụzọ dị mfe
Tofu na ero gratin cannelloni